कोहलपुरका वडा अध्यक्षको मुत्यू प्रकणः सोसाईट नोटमा के के लेखिएको छ ? हस्ताक्षरित नोट सहित…… – HamroSamrachana
हाम्रो संरचना मङ्लबार, कार्तिक २, २०७८ 1425 Views
४ माघ, नेपालगञ्ज/ कोहलपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष कृष्ण बहादुर खडकाले लेखेको २३ पेज लामो सोसाइट नोट ५ भागमा सम्बोधन गरेर लेखिएको छ ।
परिवारमा सबै भन्दा नजिकको जिवन साथी श्रीमतीलाई आमा भनेर सम्बोधन गरेर आफनो सोसाइट नोटमा लेख्नुभएको छ । सम्पूण साथीहरु भनेर मतदाता तथा सबै साथीभाईहरु सम्बोधन गरिएको छ ।
त्यर्सै गरि छोरालाई बाबु भनेर लेख्न सुरु गर्नुभएको छ भने ज्वाइका साथै नेपालगञ्ज स्थित सिद्दार्थ बैकलाई सम्बोधन गरेर अलग अलग भागमा सम्बोधनका साथ आफुलाई परेको तनाव र भावनात्मक संवेगात्मक कुरा लेखि हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको छ ।
तपाईहरु बुझनु हुन्न मरो जीवन साथीलाई,
सानी मैले तीमिलाई आमा भन्न लागेको धेरै भयो । तिमीले बुझीनौं । ११ बर्षको उमेरमा तीमिलाई तिम्रा र मेरा बाबु आमाले हामीलाई साथी बनाए । हामीले ६५ बर्ष साथ बस्यौ …………
श्री सिदार्थ बैंक…..
सर, तपाई मान्छे हो या पसु १७ महिना भयो तपाईले मलार्ई यो भन्नै पर्ने अवस्थामा पु–याएको ।
मैले थाह पाएपछि कुनै त्रैमासिक तपाईको रोकीएको छ १ अथवा थियो । यो भनेको ओडी बनाउने कमिशन पदैन भनेर यो कार्य गरिएको हो । मलाई थाह थिएन । छोरा बुद्धि नभएको समयमा तपाईहरु बैंकको कारोबारको हिसाबमा मान्छेलाई कमिशन माग्ने । के यहि हो बेंकको निति । मैले थाह पाएपछी ओडीको पैसा चुक्ता छ । के को हैरानी, परेसानी, त्यसैले तपाईहरुको ओडीको ब्याज मात्र कार्तीक, मंसिर र पौषको बांकी राखे किन भने तपाईहरुले पनि टेन्सन गराई रहने……………….
सोसाईट नोटको अन्य पेजहरुमा आफन्तहरुलाई सम्झेर मनका केही सम्बेदनाहरु भावुक भएर शब्दमा उतारिएको छ । जुन समाजिक हिसाबले यहां उतारिएको छैन । तर नेपालमा च्याउ जस्तै खुलेका बैकले आफनो परफरमेन्सको नाममा अनावश्यक टर्चर दिएको उक्त घटनासंग सम्वन्धीत सोसाईट नोटमा उल्लेख गरिएको छ । बिदेशमा रहेका छोराले एक कल नउठाउदा पनि उक्त घटना घटना घटनुमा सहयोगी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपालको नयां फौजदारि कानुनले मानिसलाई मर्न बाध्य पार्ने वा उक्साउनेलाई पनि कर्तब्य ज्यान गरिएको बराबर मानेर कानुनी दायरामा ल्याएको छ भने बैंक पनि एक कम्पनी भएको र कम्पनीलाई कानुनले ब्यक्ती सरह मानेकोले उक्त सोसाइट नोटको आधारमा मानिसलाई मर्न बाध्य पार्ने बैंकलाई कर्तब्य ज्यान अन्र्तगत मुद्धा लाग्न सक्ने कानुनका खेलाडीहरुले जानकारी दिनुभएको छ ।